सामसङ ग्यालेक्सी एस २० र एस २० प्लसको प्रि-अर्डर खुल्ला, यस्तो छ बजार मूल्य र अफरहरु - Technology Khabar
» सामसङ ग्यालेक्सी एस २० र एस २० प्लसको प्रि-अर्डर खुल्ला, यस्तो छ बजार मूल्य र अफरहरु
काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक्स तथा स्मार्टफोन ब्राण्ड सामसङ नेपालले हालै आफ्नो प्रि-अर्डर अफर अन्तर्गत ग्यालेक्सी एस२० स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ । सामसङको यो फ्ल्यागसिप डिभाइसमा आधारभूत परिवर्तन गरिएको छ, जसले गर्दा यो फोनले हाम्रो संसारलाई क्याप्चर गर्नलाई थप सहजता प्रदान गर्दछ ।
नेपालमा यही फाल्गुन ३० गते देखि ग्यालेक्सी एस २० र एस २० प्लस (Galaxy S20 & Galaxy S20+) उपलब्ध हुनेछ । साथै प्रि–अडर गर्नु हुने उपभोक्ताहरुले यी फोनहरु सो मिति भन्दा अगाडि पाउनुहुनेछ ।
सामसङका दुबै फोन ग्यालेक्सी एस२० र एस २० प्लस सेटहरु नेपाली बजारमा निम्न मूल्यमा बिक्री हुने छन् ।
“सामसङ ग्यालेक्सी एस २० सीरिजले भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । यस फ्ल्यागसिप डिभाइसमा रहेको सेन्सर र प्रविधिले भिडियो र फोटो खिच्न झन् सजिलो बनाएको छ,” सामसङ मोबाइल बिजिनेस हेड प्रणय रत्न स्थापितले बताए ।
ग्यालेक्सी एस २० प्लस अग्रिम अर्डर गरेका ग्राहकहरुले ग्यालेक्सी बड्स प्लस निःशुल्क वा ३२ इन्चको सामसङ टिभि रु. ५,९९९/-मा खरिद गर्न सक्नुहुने छ । साथै, ग्यालेक्सी एस २० अग्रिम अर्डर गरेका ग्राहकहरुले रु. २,९९९र( थप गरी ग्यालेक्सी बड्स प्लस वा ३२ इन्चको सामसङ टिभि रु ८,९९९/- मा खरिद गर्न सक्नुहुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
साथै अग्रिम अर्डर गर्नुहुने ग्राहकहरु लक्की ड्र का लागि स्वतः योग्य हुनुहुनेछ जसमा विजेताहरुले टर्कीस एयरलाईन्सको तर्फबाट दुइतर्फी बिजनेस क्लास टिकेट, ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ २, केजीएच ग्रुपको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट वा हिमालयन फ्रन्ट होटेलमा दुई रात बसाइ पाउनुहनेछ । साथै, लेट मि इनको तर्फबाट रु .५०००/- बराबरको कुपन पनि पाउनुहुने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।